UGoogle ukhupha i-Android 12 beta 2 kwiimodeli ezihambelana ne-pixel
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo UGoogle ukhupha i-Android 12 beta 2 kwiimodeli ezifanelekileyo zePixel
UGoogle ukhupha i-Android 12 beta 2 kwiimodeli ezifanelekileyo zePixel
Abanini bePixel lelinye inyathelo elisondeleyo ekufumaneni i-Android 12 njenge 9to5Google utshilo namhlanje ukuba uphando uqalile ukutyhala ngaphandle kwe-Android 12 beta 2 ukuya kubasebenzisi bePixel (iPixel 3 nangaphezulu). Uhlaziyo lubandakanya uninzi lweempawu ezintsha zabucala ezongezwa kwinkqubo yokusebenza kunye nolwakhiwo olutsha kubandakanya ixesha leyure ezingama-24 elibonisa ukuba zeziphi iiapps eziye zafikelela kwifowuni kunye nekhamera, imakrofoni kunye nedatha yendawo.
Elinye inqaku elifunyenwe kwi-beta entsha ngumyalezo ophumayo ukuze kukwazise xa usetyenziso lufunda ibhodi eqhotyoshwayo. Kuba abasebenzisi bahlala bekopa iinombolo zeakhawunti okanye iipassword kwiibhodi zabo zokunamathisela, kubalulekile ukwazi ukuba ngubani oza kufunda le datha. Ixesha ekuphela kwalo myalezo alibonisiyo, kuxa idatha ekwibhodi eqhotyoshwayo enokufundwa ngu-app ikhutshelwe kwakuloo app
Ngokufana namachaphaza e-Orenji nalaGreen afunyenwe ngaphezulu kweentsimbi zeselfowuni kwi-iPhone (ebonisa ukuba usetyenziso lusebenzisa isiphatho sakho kunye neefowuni kunye nekhamera ngokwahlukeneyo), abasebenzisi be-Android 12 beta 2 baya kubona imakrofoni okanye izikhombisi zekhamera xa iiapps zisebenzisa ezo izivamvo ezimbini.
UGoogle ukhupha i-Android 12 beta 2 Ithayile entsha 'ye-Intanethi' kuseto olukhawulezayo iya kukubonisa ifowuni kunye neeapos zonxibelelwano ezikwi-Intanethi kubandakanya igama lenethiwekhi yakho yeWi-Fi. Ukuthinta i icon yeWi-Fi kuyakuvumela ukuba ukhubaze ngokukhawuleza uqhagamshelo lwakho lwe-Wi-Fi kwaye kuya kukubonisa uluhlu lweempawu ezikufutshane ze-Wi-Fi kwaye ikunike ithuba lokucima / kwinethiwekhi yeselula. Uhlaziyo longeza i-GPay ithayile kuseto olukhawulezileyo lokutshintsha 'iiKhadi kunye nokudlula.'
Ukuze ube ngumvavanyi we-beta ye-Android ye-12 kwiPixel yakho, vula indawo yeNkqubo yeBeta ye-Android kwaye ucofe iqhosha elithi 'Jonga izixhobo zakho ezifanelekileyo.' Landela umkhombandlela kwaye uya kufumana i-Android 12 beta 2 yokuhlaziya i-OTA. Nje ukuba ufumane isaziso sokuba uhlaziyo lukwifowuni yakho, yiya kuUseto>Inkqubo>Phambili>Uhlaziyo lwenkqubo.
Ukuba iPixel yakho ngumqhubi wakho wemihla ngemihla, unokufuna ukulinda ingxelo yokugqibela ye-Android 12 ngaphambi kokuyifaka. Emva kwayo yonke loo nto, uhlaziyo lwe-Android 12 beta 2 aluzinzanga kwaye iiapps onokuzidinga ukuze usebenze okanye udlale zisenokungasebenzi ngokupheleleyo ngexesha lokuvavanywa kwe-beta.
yeka ukudlala ngokuzenzekelayo kwi-facebook
kutheni ikhamera yam imfiliba
dlala ngakumbi vs yenza ngaphezulu kweverizon
Le app ye-Android ikuvumela ukuba ujonge ibhetri eseleyo yeeApple AirPods, iiBeatsX earbuds
I-Samsung SM-N910A ibonakala ngathi iyiGlass Qaphela 4 ene-5.7-intshi Quad HD screen
Amagorha okwandiswa kweSkyrim kwaBadala beScrolls: Iintsomi ziya bukhoma kwi-Android / iOS
I-T-Mobile kunye neapos ye-Web Guard evimba iisayithi ezicocekileyo